Umaki: isikhathi sokunaka | Martech Zone
Maka: ukunakwa isikhathi
NgoMsombuluko, Novemba 14, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 eyedlule, ngabhala ukuthi izikhathi zokunaka ziyakhula. Njengoba besisebenza namakhasimende kule minyaka edlule, lokhu kuyaqhubeka nokufakazelwa yize kunenkolelo yokuthi abafundi, ababukeli, nabalaleli ngeke banamathele. Ababonisi bayaqhubeka nokusho ukuthi ukunakwa kwehlisiwe, ngibiza i-bollox. Okuguqukile kungukukhetha - kusinikeza ithuba lokweqa ngokushesha okungabalulekile, okungalungile, noma okuqukethwe okungabandakanyi ukuthola okuqukethwe okuhle. Lapho ngiqala
Izibalo eziyi-15 zokuthi ukunakekelwa okubucayi kunakwa kanjani yi-Marketing Yakho Yedijithali
NgeSonto, ngoJuni 7, i-2015 NgeSonto, ngoJuni 7, i-2015 Douglas Karr
Ngibubula kancane lapho ochwepheshe bemboni beqhubeka nokufuna amazwibela amancane namancane, okuqukethwe okusheshayo nokusheshayo, amavidiyo amafushane futhi amafushane, imicimbi esheshayo nesheshayo. Kuyakhathaza ngoba kugxile ekuziphatheni kukonke hhayi ngqo ekuziphatheni kwezithameli zakho. Vele, uma ngizothenga inki yephrinta online - ngidinga ukuthola engikudingayo ngokushesha, ngibone imininingwane, bese ngibheka. Kepha uma ngithenga okusha
Ingozi akuyona ukunakwa, kungumongo
NgoMsombuluko, Septemba 2, 2013 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Sibe nengxoxo emnandi noMark Schaefer kwi-podcast yethu mayelana nokuthunyelwe kwakhe, ukuthi i-physics yezokuxhumana ibulala kanjani isu lakho lokumaketha. UMark unikeza ubufakazi bokuthi yonke inkampani kumele isebenze ekuhlinzekeni okuqukethwe okumangazayo, amavolumu aphezulu wokuqukethwe okubalulekile nokuletha lokho okuqukethwe lapho kukhona khona izethameli. Abanye abantu bakubiza lokhu okuqukethwe okulula ukudla namanye ama-nuggets. Kukhona ukuqhuma kwalokhu okuqukethwe ngenxa yabasebenzisi ababukwayo abanjengoPinterest, Instagram noVine.
4 Amasekhondi noma iBust
NgoLwesithathu, Novemba 8, 2006 NgoLwesihlanu, Okthoba 24, 2014 Douglas Karr
Uyazikhumbula izinsuku zokulala nemodemu yakho iklabalasa ulanda amakhasi ukuze uzibuke ngakusasa ekuseni? Ngicabanga ukuthi lezo zinsuku zisemuva kakhulu kithi. UJohn Chow uthumele inothi kulolu cwaningo ekhishwe yiJupiter ethi iningi labathengi abakwi-inthanethi bazotakula uma ikhasi lakho lingalayishi ngemizuzwana emi-4 noma ngaphansi. Ngokuya ngempendulo yabathengi be-inthanethi abangu-1,058 abahlolwa ngesikhathi sokuqala
Izikhathi Zokumaketha Ziyanwetshwa, Ziyancipha!
NgoLwesine, July 20, 2006 NgoMsombuluko, Novemba 14, 2016 Douglas Karr
Ngenkathi ngiphethe umnyango wezokumaketha oqondile, ngangijwayele ukutshela amaklayenti ukuthi isikhathi okumele bakuthathe ukunakwa kwethemba sasihlobene ngqo nesikhathi esithathayo ukuhamba usuka ebhokisini leposi uye kudoti. Ngisakholelwa ukuthi lokho kuliqiniso. Angazi ukuthi ngikholelwa ukuthi ukunakwa kwabathengi kunciphile eminyakeni edlule, njengoba abathengisi abahlulekile bebekhala ngakho, noma kunjalo. Ngikholwa ukuthi ukukhula